Amathiphu Kusuka ku-Semalt On Indlela Yokuvimbela I-Traffic Yokudluliselwa Engadingeki
Uchwepheshe we-8 (Semalt Wezinhlelo Zedivolumu, uNic Chaykovskiy, udlulisa ulwazi olubalulekile mayelana nokuthi ungabhekana kanjani nokuhamba okungafuneki kwezimoto ekukhanyeni kweso.
Ngokuvamile, sithola inamba enkulu yama-imeyili nemiyalezo emithonjeni yezenhlalo mayelana nomgwaqo ongabalulekile nokungafuneki. Ngivumele lapha ngitshele ukuthi lolu hlobo lomgwaqo luvela kumawebhusayithi ogaxekile futhi aluhlangene nobuqiniso. Esikhundleni salokho, kuzosusa i-Google Analytics yakho futhi kungaholela i-Google ukukhubaza i-AdSense yakho. Yingakho kufanele ususe imoto engafanele futhi engeyona yangempela ngangokunokwenzeka.
Kuzo zombili amabhizinisi amancane namakhulu, i-SEO ibalulekile njengoba amawebhusayithi abo engakwazi ukuthola amahle angenayo. Lapha ngilungiselele amanye amathiphu nolwazi oluwusizo ngalokhu:
Lahla konke ukuvakashelwa kusuka ku-spider na bots
Okokuqala, kufanele ukhiphe konke ukuvakashelwa okuvela ezihlakalweni ezingaziwa kanye ne-bots. Lokho kungenziwa ngokulungisa izilungiselelo zakho ku-panel panel. I-Google Analytics inikeza izinsiza eziningi nezihlungi okufanele sizikhethele kuzo. Bazosivimbela ukuvimbela ukufika kwama-bots nezicabucabu ezilimaza kuwebhusayithi yethu kanye nedumela layo jikelele.
Umehluko phakathi kokudluliselwa kogaxekile no-Ghost Spam
Esikhathini salesi sihloko, ngizohlinzeka abafundi bethu ngolwazi mayelana nendlela yokuhlukanisa phakathi kokudluliselwa kogaxekile nogaxekile..Ngivumele lapha ngitshele ukuthi i-spam igaxekile ngokuqondile ihlasela i-Google Analytics yakho. Kulimaza ku-Analytics yakho, ngenkathi ugaxekile wokudluliselwa kwenzeka lapho iwebhusayithi yakho ithola imoto engalungile, ukuhambela, ukushaya, nokukhushulwa. Kubaluleke kakhulu ukuyeka lezi zokudlulisa ukugaxeka ngokushesha ngangokunokwenzeka. Amanye amawebhusayithi asebenzisa izihlungi zokumisa ugaxekile ekungeneni kubo. Ungakwazi futhi ukulungisa izilungiselelo zakho bese udala inamba yezihlungi.
Njalo uvimbele amaforamu / amawebhusayithi osolisayo
Kubaluleke kakhulu ukuvimbela izinkundla ezingathandekiyo kanye nazo zonke ezinye izinto zokudluliselwa kogaxekile. Ngenxa yalokhu, kufanele uhambe kusigaba somlawuli bese udala izihlungi. Vimbela ama-IP amaningi ngangokunokwenzeka ukuqinisekisa ukuphepha kwakho kwi-inthanethi. Uma wenza kanjalo, kufanele uqaphele njengoba ukubeka i-URL ngendlela efanele kubaluleke kakhulu. Uma kwenzeka, ufake i-URL engalungile, cishe uzolahlekelwa ukufinyelela kwakho ku-Google Analytics noma uzovinjelwa kuwo amasonto amaningana. Le ndlela iwusizo kuphela uma uzovimba ukuthunyelwa kogaxekile kunamba enkulu. Akuhlangene nhlobo nogaxekile futhi awukwazi ukusebenza nalokhu kunoma yikuphi izindleko.
Ungavimba futhi ama-URL amaningi ngale nqubo. Vimba ulimi logaxekile ku-Google Analytics Kuyadingeka ukuba sivimbele ulimi logaxekile ku-Google Analytics. Ngenxa yalokhu, kufanele ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese ukhetha inketho yesihlungi yangokwezifiso. Khona-ke kuzodingeka ulungise izilungiselelo zolimi lwakho bese uchofoza inkinobho ye-Go ukuze usebenze. Izihlungi ngokuvamile zithatha amahora amabili namashumi amane ukusebenza kahle. Ungaqinisekisa izihlungi eziningi njengoba ufuna uma lesi sikhathi sidlulile. Okulinganiselwe kwezinhlamvu ezingu-255 kuvunyelwe iphethini lokuhlunga futhi kufanele zengezwe ukuze ugweme ugaxekile ogaxekile kakhulu. Ngithemba ukuthi ujabulele ukufunda lesi sihloko. Ngalezi zeluleko, ungakwazi kalula ukugcina i-Google Analytics yakho igcina kusuka ku-spam yogaxekile, emgwaqweni ongalungile nokungekho emthethweni.